फिल्म चर्चाः जिसस क्राइस्टकी दुलही | साहित्यपोस्ट
फिल्म चर्चाः जिसस क्राइस्टकी दुलही
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित १० पुष २०७८ १०:०१
१७ औँ शताब्दीताका कन्भेन्टमा सेवा गर्न छिरेकी बालिका बेनेडेटा कार्लिनी कालान्तरमा सन्तका रूपमा घोषित भइन् । उनलाइ सन् १९८० को दशकमा मदर टेरेसाजस्तै सन्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
केहीलाइ त्यो बेला बेनेडेटा कार्लिनीलाइ सन्त घोषणा गरेको चित्त बुझेको थिएन । तीमध्ये एक थिइन्, जुडिथ सी. ब्राउन । त्यसपछि जुडिथले एउटा गैरआख्यानात्मक पुस्तक लेखिन्, इम्मोडेस्ट एक्ट्सः द लाइफ अफ अ लेस्बियन नन इन रेनेसा इटाली ।
सोही पुस्तकमा आधारित रहेर फिल्म निर्देशक पल भर्होइभनले फिल्म बनाएका छन्, बेनेडेटा । यसै वर्ष प्रदर्शनीमा आएको यो फिल्म क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो र फिल्मले राम्रै चर्चा बटुलेको थियो ।
फिल्म चर्चाः एफिल
साहित्यपोस्ट	 १४ फाल्गुन २०७८ १०:०१
साहित्यपोस्ट	 ९ आश्विन २०७८ १४:०१
फिल्म निर्माण सन् २०१८ को जुलाइबाट शुरू भए पनि यसलाइ गुपचुप राखिएको थियो । फिल्मले विवादास्पद विषय उठाएको र सन्त घोषित महिलामाथि समलैंकिक सम्बन्धका बारेमा खुलेर देखाइएका कारण विवाद चुलिने र फिल्म नबन्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यसैले गुपचुप राखियो । फिल्मलाइ फ्रान्सको पाथे प्रोडक्सन्सले निर्माण गरेको हो ।
फिल्म २०१९ मा नै क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा देखाउने उद्देश्यका साथ बनाइएको थियो । तर फिल्म निर्देशक भर्होइभन बिरामी परेका कारण २०१९ मा रिलिज हुन पाएन । २०२० को क्यान्स पनि कोभिड १९ को आतंकका कारण छुट्यो । २०२१ को क्यान्समा अन्ततः फिल्म रिलिज भयो ।
इटालीका एक जना धनी व्यापारीकी छोरी बेनेडेटा बाल्यकालदेखि नै धार्मिक स्वभावकी हुन्छिन् । त्यो बेला घरका कुनै एक जना छोरी कन्भेन्टमा पढ्नु, नन बन्नु गर्वको कुरा मानिन्थ्यो । त्यसैले पनि बेनेडेटाका परिवारले आफूसँग भएको ठूलो रकम दिएर छोरीलाइ नन बनाउन आग्रह गर्छन् । बेनेडेटाका परिवार कति दयालु हुन्छन् भने उनीहरूले घरबाट भागेर कन्भेन्टमा शरण लिन आग्रह गरिरहेकी एउटी केटीलाइ पनि कन्भेन्टमा ठूलो रकम दिन्छन् ।
फिल्मको शुरूवात नै रोचक छ, जहाँ लुटेराहरू घोडामा आउँछन् र बेनेडेटाकी आमाले लगाएका गहना लुट्छन् । फुच्ची बेनेडेटाले भन्छे, ‘त्यो गहना फिर्ता देओ ।’
लुटेराको सरदारले भन्छ, ‘ओहो, यो फुच्ची त तिमीहरूभन्दा पनि बहादुर रहिछ । अनि गहना फिर्ता चैँ किन दिनु नि ?’
‘अरूको लुटेर खानु हुँदैन, नत्र भर्जिन मेरी (जिसस क्राइस्टकी माता मेरीलाइ भगवान सरह नै मान्ने समुदाय छन्) को सराप लाग्छ,’ बेनेडेटाले नडराइ उत्तर दिन्छे ।
बेनेडेटाको निडरता देखेर लुटेरहरू आश्चर्य र रमाइलो दुवै मान्छन् तर त्यही बेला चरोले रूखबाट बिस्ट्याइदिन्छ । हैकम जमाउन आएको लुटेराको सरदार समूह बिस्ट्याएपछि नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ । त्यसै पनि चरोको बिस्ट्याइ राम्रो मानिदैन । पक्कै यो भर्जिन मेरीको सराप हुनसक्ने भन्दै उनीहरू लुटेका सामान फिर्ता दिएर भाग्छन् । बाबुआमा बेनेडेटाको निडरताबाट प्रशन्न हुन्छन् र उसलाइ कन्भेन्टमा हालिदिन्छन् ।
अब बेनेडेटा जवान हुन्छिन् । उनी आफूलाइ जिससकी दुलही मान्छिन् । उनी जहाँतहीँ जिससलाइ देख्छिन् । आफू अप्ठेरोमा परेका कयौँ सपना देख्छिन् र त्यहाँ उनलाइ जोगाउन हरतरहले जिसस आइपुग्छन् । उनको यो सपना, कल्पना त कहिलेकाहीँ यौनिक पनि हुन्छन् । जिससले उनलाइ चुम्बन गरेको सपना उनी देखिरहन्छिन् ।
यही बेला एक जना जवान युवती घरबाट भागेर कन्भेन्टमा शरण लिन आइपुग्छे । गरिब परिवारकी उसलाइ शरण दिन कन्भेन्ट तयार हुँदैन तर बेनेडेटाको परिवार शरणका लागि मोटो रकम दिन तयार हुन्छ । कुरा यहीँ बिग्रन्छ । यो युवतीकी आमाको मृत्युपछि बाबु र उसका दाइहरूबाट लगातार बलात्कृत भएका कारण घरबाट भागेकी हुन्छे । हरेक दिन बलात्कृत भएका कारण उसलाइ यौनिक गतिविधि सामान्य लाग्छ र जवानीको अवस्थामा ऊ अश्लील हर्कत गरिरहन्छे । उसको मित्रता बेनेडेटासँग बढेपछि बेनेडेटालाइ पनि उसले यौनिक गतिविधिमा लाग्न लोभ्याउँछे ।
हरदम मानसिक रूपमा जिसस क्राइस्ट मात्र देख्ने बेनेडेटा अब समलैंगिक यौन सम्बन्धमा पनि लिप्त हुन्छिन् । तर त्यो भन्दा पनि आफूलाइ अरूभन्दा बढी धार्मिक देखाउने बेनेडेटाको प्रवृत्ति केहीलाइ मन पर्दैन । तीमध्ये एक हुन्छिन्, हेड ननकी आफ्नै छोरी । उनले बेनेडेटा आफूलाइ बढी धार्मिक देखाउन र जिसस क्राइस्ट आफूमा समाहित भएको प्रमाणित गर्न हातमा दुलो पारेर रगत निकाल्ने, टाउकोमा काँडाको मुकुट लगाएर चोट पुर्याउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्छिन् । अरूले यसलाइ चमत्कार ठानेर त्यो मोनास्ट्रीको प्रमुखसमेत बनाइदिन्छन् । पहिलेकी प्रमुखलाइ यो कुरा मन पर्दैन । उनकी छोरीलाइ पनि मन पर्दैन । उनले त बेनेडेटा नक्कली दुलही बनेको गम्भीर आरोप लगाउँछिन् तर पछि त्यसमा असफल भएपछि आत्महत्या गर्छिन् । आफ्नी छोरीले आत्महत्या गरेपछि विह्वल भएकी पूर्व हेड ननले बेनेडेटा र उनकी प्रेमिका युवतीबीचको सम्बन्ध उजागर गरिदिने नियतका साथ फ्लोरेन्समा रहेका प्रमुख पोपलाइ कुरा लगाउँछिन् ।
बेनेडेटामाथि कारबाही हुन्छ । उनलाइ आगोमा पोल्ने तयारी हुन्छ तर अन्त्यमा लामो समयदेखि महामारीले ग्रस्त भएको त्यो ठाउँमा आरोप लगाउने पूर्व प्रमुख ननदेखि कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउने पोपसमेत सोही कालाजरको शिकार बन्न पुग्छन् । उनीहरूले बेनेडेटालाइ नचाहिँदो आरोप लगाएको भन्दै सर्वसाधारणले हत्या गर्छन् र अराजकता फैलन्छ ।
यस घटनाले बेनेडेटाको इज्जतमाथि केही दाग त लाग्छ तर जीवनभर उनले त्यो मोनास्ट्री छाड्दिनन् । उनका लागि एउटा कोठा बेग्लै छुट्याइन्छ । जीवनभर उनी त्यही कोठामा एक्लो जीवन बिताउँछिन् ।
फिल्मले एउटी युवा ननको मानसिकता, उसमा रहेको स्प्लिट पर्सन्यालिटीजस्ता समस्याजस्ता कुरालाइ उजागर गरेको छ । एउटी चतुर ननले कसरी अन्धविश्वासको युगमा आफूलाइ स्थापित गरिन् र कसरी यौनले उनलाइ पतन गरायो भन्ने विषयमा फिल्मले प्रस्ट पारेको छ ।
त्यसै पनि धार्मिक अखडाहरू यौन शोषण हुने ठाउँका रूपमा परिचित छन् । कयौँ फादरहरूले कलिला बालबालिकाहरूको यौन शोषण गर्ने गरेका घटना प्रकाशमा आइरहन्छन् । कति हिन्दु गुरू यौनकाण्डमा फँसेका छन् । यी सबै किन हुन्छन् ? किनभने यौनलाइ हामीले साह्रै उच्छृङ्खल मानेका छौँ । जुन ठाउँमा यौनलाइ एउटा स्वाभाविक चिज मानिन्छ, त्यहाँ कुण्ठा कम हुन्छ ।
सम्भवतः यौन कुण्ठाका कारण बेनेडेटामा अस्वाभाविक गतिविधि बढेको हो कि भन्ने फिल्म हेर्दा बुझिन्छ । निर्देशकले त्यसै कुरालाइ जोड दिएका छन् ।
किताबमा आधारित फिल्मजिसस क्राइस्टफिल्मबेनेडेटा